Banaan bax looga soo horjeeday Faragalin ka jirta doorashada aqalka hoose oo Cadaado ka dhacayday +Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Banaan bax looga soo horjeeday Faragalin ka jirta doorashada aqalka hoose oo Cadaado ka dhacayday +Video
Waxaa maanta magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug ka dhacay banaan bax ay dhigayeen Waxgarad, Haween ,Dhalinyaro iyo qeybo badan oo kamid ah Bulshada ku dhaan magaalada Cadaado.
Banaan baxan ayaa ahaa mid looga soo horjeeday Cadaalad daro iyo musuq maasuq la sheegay in ay ka jirto doorashada xubnaha aqalka hoose ee ka socota Madaxtooyada magaalada Cadaado ee Xarunta KMG ee maamulka Galmudug.
Qaar kamid ah Odayaashii ka hadlay banaan baxa ayaa sheegay in ay ka jirto cadaaad daro iyo musuq maasuq lagu hayo doorashada xubnaha aqalka Hose, waxa ayna ku eedeeyeen Musuqaasi in ay wax ka wadaan Guddiga doorashooyinka dadban iyo Madaxda maamulka Galmudug.
Waxa ay ku baaqayeen dadka dhigayay banaan baxa in wax laga qabto cadaalada darada iyo musuq maasuqa ka jira doorashada aqalka hoose ee ka soota magaalada Cadaado.
Banaan baxan ayaa imaanaya xili qaar kamid ah Musharixiinta u taagan doorashada xubnaha aqalka hoose ay sheegeen in a jirto cadaalad daro iyo faragalin lagu hayo doorashada, waxa ayna ka digeen in Baaramaanka xalaal ah aan la hel doonin hadaan wax laga qaban musuqa iyo cadaalada dara jirta.